DAAWO: Madaxweynaha Puntland, Maxaa laga sugayaa goor dhaw? – Puntlandtimes
DAAWO: Madaxweynaha Puntland, Maxaa laga sugayaa goor dhaw?
May 13, 2019 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland SIciid Cabdullaahi Deni ayaa goor dhaw oo caawa ah qaban doona shir Jaraa’id oo uga hadli doono arrimihii kala duwanaa ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday Aqalka Madaxtooyada.
Madaxweynaha Puntland, wuxuu ka hadli doonaa guulaha siyaasadeed ama guuldarooyinka la gaaray, Shirkii xalay dhacay wuxuu ku saabsanaa, Puntland miyay beel-dareysay Jubbaland iyo Galmudug oo ay ka maarantay.
Si weyn ayaa isha loogu hayaa Shir Jaraa’id ee Madaxweyne Deni, wax badan ayaa lafilayaa in ay ka soo baxaan dadkuna si gaar ah ayay isha ugu hayaan dhaqdhaqaaqyada kuwajahnaa talaabooyinkii Xukuumada Puntland qaaday.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in habeen hore kulan gaar ah oo saacado badan qaatay dhexmaray Madaxweyne Farmaajo & Madaxweyne Deni, badankiisana looga wada hadlay masaalixda siyasadeed ee dhinacyadan ay leeyihiin.
Su’aalaha lays weydinayo waxaa kamid ah Puntland miyay ka dabacday Difaaca Nidaamka Faderaalka? Miyey aqbashay Hab dhaqanka DF Soomaaliya? Ma waxay raacday qorshaha Madaxda DFS ee doorashada 2021-ka? Maxayse ka faa’iiday shirkii Garoowe?
Wasaarada arrimaha gudaha Soomaaliya oo soo saartay habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada.
NISA oo sheegtay iney Muqdisho ku qabatay xubin Shabaab ah.
DEG DEG+AKHRISO: DF Soomaaliya oo soo saartay Habraaca Doorashooyinka Madaxtinimada Galmudug iyo Jubbaland
DAAWO: Somaliland oo banaanka soo dhigtay Sirtii Qarsooneyd ee ay kala hadleen Mucaaradka DF Soomaaliya.
AKHRISO: Xisbiga UPD ee M/weynihii hore DF Soomaaliya oo walaac ka muujiyey Faragalinta dawladda DF ku hayso Galmudug & Jubbaland.
Maamulka Galmudug oo sheegay in ay Abaalmarinayaan Askartii kahor tagtay Ninkii isku qarxin rabay Guriceel.
Dhageyso: Wasiirka Arimaha Gudaha S/L ” Somaliland Kama Faa`ideysaneyso Qilaafka Somaliya Iyo Kenya, Wadahadalada Somaliyana Diyaar Ayaan U Nahay”
DAAWO: Madaxweynaha Jubbaland oo khudbad xasaasi ah u jeediyey ciidamadiisa ku sugan Furimaha Dagaalka.
XOG HOOSE: Muxuu ku saabsanaa Kulankii dhexmaray Mucaaradka DF iyo Somaliland ee ka dhacay Nairobi?
Daawo: Madaxweyne Axmed Madoobe Oo La Hoyday Ciidamada Juballand Ee Furimaha Dagaalka
WAR DEG DEG AH: Soomaaliya oo qaadatay go`aan lagu dhabarjabinayo Kenya.
WARBIXIN: Kenya welwelka ay ka qabtaa arrimaha ciidamada DANAB, Shidaalka & Deyn Cafinta Soomaaliya, Waa maxay?
SAWIRRO: Galmudug oo fashilisay weerar qof Ismiidaamiyey uu geysan lahaa, gacantana ku dhigtay Ruuxii.
Soomaaliya oo si kulul u cambaareysay Gantaalada Xuutiyiinta Yemen ku garaaceen Sacuudi Careebiya.
WARARKA KENYA: Soomaaliya oo doonaysa in dalkeeda laga saaro ciidamada Kenya, Yaase lagu bedelayaa?
AKHRISO: DF Soomaaliya oo burburisay Heshiisyo ay horey u galeen Puntland, Galmudug, S/land iyo Xukuumadii Sh. Axmed
DAAWO: Jubbaland oo ka hadashay Xariirka xumaanaya ee Kenya & Soomaaliya, fariin-na u dirtay DF Soomaaliya
DEG DEG+AKHRISO: Puntland & Galmudug oo mawqif mideysan ka qaadanaya Arrimaha Siyaasadda Soomaaliya
Kenya Oo Cadaadiska Diplomaasiyadeed Ku Sii Xoojinaysa Somalia,Markaan Dhanka Maamulka Goboleedyada Ayay Ka Soo Galayaan .
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Somaliya oo ka mid noqday dadka ku dhintay qarixii maanta
SAWIRRO: Deni & Xaaf oo ku kulmay Gaalkacyo, walina kulan gaar ah u socdo.
AKHRISO: DF Soomaaliya oo jawaab rasmi ka bixisay ficiladii Kenya ay ku dhaqaaqday, kuna dhawaaqday
FAAHFAAHIN: Xildhibaano katirsan baarlamaanka Soomaaliya oo dhaawacyo kasoo gaareen qaraxyo ka dhacay Muqdisho & Sarkaal la dilay.
DAAWO: Wararkii ugu dambeeyey ee xiisada Kenya ay ku wado Soomaaliya & DF oo aamusnaan kaga jawaabtay.
Qarax khasaare geystay oo xalay ka dhacay Kismaayo
DEG DEG+FAAHFAAHIN: Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Dagaalo dhexmaray Puntland & Somaliland iyo Wasiiro.
Axmed Madoobe” Doorashada Jubbaland Waxa Ammaankeeda Ilaalinaya Ciidamadeena”
Kenya oo weerar ku bilowday Ganacsatada Soomaalida, 5 Xawaaladood ayaa la xiray
DEG DEG+DAAWO: DF Soomaaliya Digniin u dirtay Ganacsatada Soomaalida ee Kenya kusugan
Dawladda Soomaaliya fariin u dirtay Ganacsatada Soomaalida ee kusugan Kenya, uguna baaqday.
XOG RASMI AH: DF Soomaaliya miyey ka jawaabaysaa ficilada Siyaasadda ka araddan ee Kenya qaadayso?
XOG: Ciidamada Kenya oo laga saaray Garoonka diyaaradaha Kismaayo, Yaase ka dambeeyey amarka lagu saaray?
DEG DEG: Kenya oo soo tarxiilaysa Xildhibaano, Wasiiro iyo Shacab Soomaaliyeed maanta & Xariirka labada dal oo gaaray.
Ciidanka Amniga Oo Caawa Gacanta Ku Dhigay Nin Weerar Ka Geystay Muqdisho
FAALLO: Maxaa si ka’ah Xariirka Soomaaliya & Kenya?
Ciidamada Puntland & Somaliland oo hubka culus isku garaacaya duleedka Yubbe.
DAAWO:Dagaal culus oo ka dhex qarxay Shahrukh Khan, Akhshay Kumar & Director Karan Johar “Maxaa tahay sababtu?”